KISMAAYO(P-TIMES) – Warsidaha Puntlandtimes.com ayaa ogaaday in wafdi sare oo kasocda dalka Kenya ay 2dii maalmood ee lasoo dhaafay booqasho qarsoodi ah ku tageen magaalada Kismaayo, waxaana hogaaminaysay wasiirka Arrimaha dibada ee dalkas, iyadoo ay xubno ka ahaayeen Taliyayaasha ciidamada Sirdoonka iyo Milateriga dalka Kenya.
Kulan gaar ah oo ay la yeesheen Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayay u gudbiyeen talaabooyinka qorsheysan ee ay sameynayaan dawladda Faderaalka Iyo Itoobiya oo is garabsanaya, waxayna si cad u sheegeen in ay taageerayaan.
Xogta ay heshay Puntlandtimes.com waxay daaha ka rogaysaa in ay dhinacyadan kulankoodu ahaa mid qarsoodi ah,waxaana qodobada laga hadlay ka mid ahaa in Kenya ay ciidamadeedu toos u garab istaagayaan haddii ay Itoobiya isku daydo in ay khal-khalgaliso arrimaha doorashooyinka.
Sidaas oo kale waxay Kenya si cad u sheegtay in ay taageersan taahy nidaamka ama habraaca doorashooyinka Jubbaland, ayna doonayaan in dhab ay wax uga dhacaan Jubbaland, taas oo ah in ay ka soo horjeedaan faragalin kasta oo lagu sameeyo.
Warsiduhu wuxu ogaaday in ay wafdigan saacado kooban kusugnaayen magaalada Kismaayo, ayna u sheegeen Madaxweyne Axmed Madoobe in ay iyagu soo dhiseen Jubbaland, sidaas awgeedna aysan cidna ka yeeli doonin la dumiyo oo loo dhiibo cid diidan wada noolaanshaha labada dal ee Kenya & Soomaaliya.
Sidaas oo kale waxay kulan la yeesheen mid kamid ah musharaxiinta u taagan Madaxweyne-nimada Jubbaland ee mucaaradka la safan, laakiin horey uga mid ahaa raggii qeybta weyn ka qaatay sidii Jubbaland ay u dhismi lahayd, waxayna isku raaceen taageerada Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Dawladda Soomaaliya, Kenya & Itoobiya ayaa loolan adag ku dhexmarayaa doorashada Jubbaland, berrito oo ay qabsoomaysana waxaa lafilayaa in la doorto Madaxweynaha hadda talada haya Axmed Maxamed Islam (Axmed Madoobe), dawladdu wey diiday in ay aqoonsayo, sidaas oo kalena beesha Caalamka ayaa ka soo horjeeda.
Anigu waxan sodhaweynaya Doorka Dawladda kenya ee dhanka jubbada hoose waxa muqanayasa keenya in aay ka’isansantahay itoobiya tusale ninka somaliga ah ee ku dhashay keenya & midka somaliga ah ee ku dhashay itoobiya waxa xoriyad wanagsan kan ku dhashay keenya,tusale,Cumar Macalin & Aadan Barre Ducale waad ogtihin waxay malin kasta ku hadlan cid xirta iyo cid lahadasha majirto,waxad ogtihin culimada somalida sida sheikh Ummal iyo shibli sheikh kale Xassin sidey donaan yey diinta uga hadlan wax kontarool ah oo lagu hayo majiraan dadkas somalida ah oo kala duwan,qof somali ah ama siyasi ha’ahado ama culimo ha’ahahado oo itoobiya ka hadli kara majiro,tusaale madaxweynihii hoore ee ismamulka somalida itoobiya mudo sanad kabadan ayuu uxuranyahay itoobiya & kuwo Daba dhirif uha itoobiya waxa lagu hasto majirto oo Danbi ah marka laga tago wax aan xabashidu cusub kufarxin & oramo mid kasta hanoqdene.
Midkaan wata Mohamed Warsame ee meel walba la taagan kenyaa ka wanaagsan Itoobiya adeer adigu ma naag xaas ah oo 2 nin ay isku heystaan ayaad tahay oo hadba kii ka farxiya u jiibisa war wax isku fal xoolayahoow ama qof jira noqo oo xor ah waxna iska dhicin kara ama isaga bax goobaha raggu isku hayo oo naag ninkii guuleysta u xaroota noqo meel walba alaas ha la taagnaanine. war wuxu dhaqan xumaa ma futadaa laga dhalay.